लकडाउनपछि कसरी चल्छ हवाई सेवा? :: रवीन्द्र शाही :: Setopati
लकडाउनपछि कसरी चल्छ हवाई सेवा?
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,वैशाख २१
कोरोना महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै लकडाउन भएको नेपालमा पनि एक महिना बढी भइसक्यो। अहिलेका लागि वैशाख २५ गतेसम्मका लागि सरकारले यस्तो आवागमन बन्दको घोषणा गरेको छ।
वैशाख २५ वा त्यसपछि खुल्नेवित्तिकै आवागमन कसरी सुचारु हुन्छ? यातायातका साधनहरु कसरी सञ्चालन हुन्छन्? भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तथा ‌औषधि पत्ता नलाग्दासम्म संक्रमणको जोखिम उत्तिकै रहने भन्दै मान्छेबीचको दूरीलाई कायमै राख्नुपर्ने विभिन्न खाले सुझाव आइरहेका छन्।
दूरी कायम राख्नुपर्ने एकातिरको सुझाव छ भने अर्कोतिर आवागमन पनि विस्तारै खोल्दै जानुपर्ने छ। यस्तोमा छिमेकी देश भारतमा पनि विभिन्न गृहकार्य भइरहेका छन्। भारतमा एयरलाइन्सहरुले मे १५ पछिका लागि हवाइ यात्राका लागि बुकिङ लिन सुरू गरिसकेका छन्।
त्यहाँ एयरलाइन्स तथा एयरपोर्टमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ।
नेपालमा हवाई यातायातको व्यवस्थापन कसरी होला? के एयरलायन्सहरूले बीचको सिट खाली राखेर जहाजभित्रै दुरी कायम राखेर यात्रा गराउलान्? किन अरु नै उपाया अपनाउलान्?
बुद्ध एयरले यससम्बन्धी उडान निर्देशिका नै बनाएको छ। बुद्धले बोर्डिङ पासदेखि उडान दलका सदस्यसम्मका लागि नियम बनाएको छ। बुद्धले सरकारले उडानका लागि अनुमति दिनेबित्तिकै यस्तै नियममा रहेर उडान गर्न तयार रहेको जनाउ दिएको हो।
यात्रुको तापक्रम जाँच गर्ने, भौतिक सम्पर्कबिनै चेकजाँच गर्ने, जहाजभित्रको शौचालय बन्द गर्नेजस्ता नियम बनाएको छ। बुद्धले टर्मिनलदेखि जहाजसम्म यात्रु लिने गाडीमा पनि दुरी कायम गर्ने बताएको छ।
हरेक बिन्दुमा यात्रुले स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने जस्ता निमय बनाएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने लकडाउनपछिको उडानका लागि भन्दै कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिएको छ।
सरकारले केहीगरी कुनै निश्चित गन्तव्यमा उडान गर्न दिने आदेश दिनेवित्तिकै उडान होस् भनेर प्राधिकरणले अहिलेदेखि नै कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा उडान निर्देशिका बनाइरहेको हो।
प्राधिकरणको जोड भने पुरै जहाज भरेर जहाज उडान दिने पक्षमा छैन। उसले जहाजभित्रै पनि केही दूरी कायम गर्ने,एसी चलाउन नदिने, प्रत्येक उडानपछि जहाजको डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्ने जस्ता विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ।
एयरलाइन्सहरुले भने जहाज पूर्ण क्षमतामै उडान पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले अहिले आफूहरू विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्।
'जहाजभित्रको अवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो थप अध्ययनको विषय छ। हामीले तमाम जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्नसकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौ' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
तर लकडाउन खुले पनि हवाई जहाजहरु चैत ११ गतेअघिकै अवस्थामा जस्तो सञ्चालन भने हुने छैनन्। केही फरक नियमका साथ जहाज सञ्चालन हुने छन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख २१, २०७७, १२:४४:००